यसरी सम्झे कान्छा शेर्पाले पहिलो सगरमाथा आरोहण - Lekbesi Khabar
२०७६ चैत्र १७, सोमवार
सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको बढ्दो आकर्षण र विभिन्न किर्तिमानी कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । आरोहण इतिहासको नयाँ नयाँ किर्तिमानसँगै आठ हजारको संख्यामा आरोही सगरमाथाको चुचुरो चुम्न सफल भइसकेका छन् ।
त्यो ऐतिहासिक आरोहण दलका सदस्य आङ फुर्वा शेर्पा (कान्छा शेर्पा) भने सगरमाथाको महत्वको पत्तो नपाइकनै आरोहण दलमा सहभागी हुनुभयो । प्रथम सगरमाथा आरोहण दलका एक मात्र जीवित सदस्य शेर्पा भन्नुहुन्छ, “के गर्न जाने होला ? बाटो अप्ठेरो छ । कसरी बाटो पायो । डर पनि लागेको थियो, बाटो कसैलाई पनि थाहा थिएन, भगवान्ले देखाई दिएकी क्या हो पुग्न सफल भइयो ।”
पहिलो पटक आरोहण गर्दा कान्छा शेर्पा २० वर्षको हुनुहुन्थ्यो । हाल उहाँ ८७ वर्षको हुनुहुन्छ । आलु मात्र फल्ने खुम्बु क्षेत्रमा चामल र पैसाको चलन पनि सोही आरोहणले भित्र्याएको शेर्पा स्मरण गर्नुहुन्छ । चामल देखेको भए पनि किनेर खाने पैसा थिएन । आरोहणका क्रममा कमाएको पैसाले पहिलो पटक चामल किनेर खाँदाको खु्सी अहिले पनि अविस्मरणीय छ उहाँलाई । शेर्पालाई भात खान पाउदा असाध्यै खुसी लाग्यो । ‘
सगरमाथा हिमाल सफाई अभियानका क्रममा सगरमाथाको फेदी नाम्चेमा भेटिनुभएका शेर्पाले सगरमाथा आरोहणको इतिहास सुनाउदै आफ्नै लवजमा भन्नुभयो, “जानै पर्ने बाध्यता भयो, पैसा त चाहियो । उ बेला पैसा पाउन गाह्रो थियो । सधै आलू मात्रै खानु पर्दथ्यो । तेजिङ आउनुभन्दा अघि हामीले चामलको भात कहिल्यै खान पाएका थिएनौँ । हिलारी आयो, हामी माथि गयो, पैसा दियो, अनि चामल किनेर खायो ।”
कसरी आरोही दल सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्यो कान्छा अहिले पनि छक्क पर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हिलारी र नोर्गेले हामीलाई खोज्यो, बल्लबल्ल पाएर गयो । त्यति बेला क्याम्प, साउथ कोल भन्ने थिएन, डोरी बानेर गइयो । गम्छा बानेर चढियो । अहिले जस्तो सजिलो भ¥याङ थिएन । रुख काटेर साँघु वनाएर गइयो ।” आरोही दलमा २० शेर्पासहित न्यूजील्याण्ड र इङल्याइण्डका गरी ३५ जनाको टीम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
शेर्पाको अनुभवमा त्यतिखेर समिट गर्ने चलन नै थिएन, अहिले त दिनकै दुई÷तीन सय जना सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने गरेका छन् । उहाँलाई अहिले सगरमाथा चढनुको केही महत्व नभएजस्तो लाग्छ । “हामीले दिनको आठ रुपैयाँ ज्याला पाउने गरेका थियौँ । त्यो बेला कहाँबाट आउने पैसा ? हिलारी र नोर्गे आएपछि यो ठाउँको विकास भयो, होइन भने दुखै दुख थियो”, विगत स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
कान्छाले अहिलेसम्म हिमाल चढेको सात पटक भयो । प्रथम आरोही भारतको दार्जेलिङ, रक्सौल र रेसुङ्गाहुँदै सगरमाथाको चुचुरो चुम्न सफल भएका थिए । आरोहीलाई साउथ कोलबाट चचुरो पुग्न पाँच घण्टा र फर्कन दुई घण्टा लागेको थियो भने आरोहण पुरा गर्न तीन महिना लाग्यो ।
सगरमाथाको पाँच आरोहण गरेका सोना शेर्पा सगरमाथा आरोहणमा मावन आवागवनको चाँप धेरै देखिएको हुँदा ठूलो मानवीय क्षति हुनसक्नेप्रति सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुहुन्छ । वसन्त यामको गत मे २२ तारिखका दिन सगरमाथा आरोहण गर्नुभएका शेर्पालाई आखै अगाडि आरोहीको मृत्यू हुँदा नराम्रो लागे पनि कतिपय आरोहीको जिद्धिपनले यस्ता मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो ।
शारीरिक अवस्था कमजोर भएका र आफ्नै घमण्ड तथा जिद्धिपनले पनि मृत्यु भएको सगरमाथाको १३औँ पटक आरोहण गरेका कीर्तिमानी आरोही काजी शेर्पालले बताउनुभयो । आरोही शेर्पा भन्नुहुन्छ, “ज्यान भनेको जुवा तास जस्तै हो । जोखिम आफ्नै हातमा छ । हिउँ पहिरोमा पनि परेको थिए । अमेरिकन र चिनीयाँ आरोही भनेको कुरालाई आत्मसात गर्ने भएकाले उनीहरुसँग काम गर्न निकै सजिलो हुन्छ ।”
सगरमाथा आरोहण गर्नु आफैमा निकै ठूलो चुनौती रहेपनि आर्थिक हिसाब दृष्टिकोणबाट राम्रो कमाइको गन्तब्य पनि हो । दुई महीनाको आरोहण अवधिमा रु १५ लाखसम्म कमाइ हुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । राजनीतिक नेतृत्वले त्यस क्षेत्रमा सडक यातायातको सञ्जाल पु¥याउने भनिरहँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले चौरीखर्क भन्दा माथि मोटर बाटो लैजान नहुने भन्छन् । सगरमाथा चढ्ने आरोही बढेसँगै प्रदूषण पनि उत्तिकै थुप्रिएको छ । फोहर व्यवस्थापन अर्को चुनौती छ ।
यस पटक सरकारीतवर बाटै गरिएको सगरमाथा सफाइ अभियानले १० हजार किलो फोहर सङ्कलन गरेको थियो । अभियान भन्दा बाहेक पनि १४ हजार किलो फोहर यस वर्ष जम्मा गरिएको खुम्बु पासाङ गाउँपालिकाका प्रमुख निमा दोर्जे शेपाले जानकारी दिनुभयो ।
३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १६:४८ June 15, 2019
कानुन मन्त्रालयका उपसचिवहरुबीच कुटाकुट
सुनौली नाकामा भोकभोकै अलपत्र ३ सय ७० नेपालीलाई भारतीयले खुवाए खाना
एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर : नेपाल सरकार
भारतमा अलपत्र परेका नेपालीलाई भोकको चिन्ता
भारतको लकडाउन २१ दिन भन्दा बढी नलम्बिने
सिमानाकामा अलपत्र ३ नेपाली महाकाली नदी पौडेर दार्चुला प्रवेश !
अष्ट्रेलियामा ८ नेपाली विद्यार्थी कोरोना संक्रमित
कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएका २ जना बिरामीको वीर अस्पतालमा मृत्यु